Hazakaza-tsoavaly Frantsay Ny PMU BET ihany no afaka mitrandraka azy eto Madagasikara
Minisiteran`ny mponina Ambohijatovo Nitrangana korontana
Nahitana sorabaventy mirantiranty maneho ny fitakian`ireo mpiasa hita nanoloana ny minisiteran`ny mponina tetsy Ambohijatovo omaly. Anisan`ny fitakian`ireo mpiasa manana fifanarahana arakasa ao anatin`ny fotoana fohy (ECD) ny tombontsoa maro samihafa, ny fanefana karama ara-potoana, mitaky ny minisitera tsy ho fitaovana politika…
Ny PMU BET irery sisa manomboka izao no afaka mitrandraka ireo hazakazaka Frantsay eto amintsika. Fantatra izany nandritra ny fivoakan’ny didy iraisan’ireo minisitera efatra niara-nanao sonia izany tamin’ ny 30 martsa lasa teo, fanambarana avy amin’ny komity mpitantana ny AHCEL.
Ny Pmu Madagascar no hany tokana nanana io fitrandrahana io teo aloha hatramin’ny fahatapahan’ny fifanarahana teo amin’io orinasa iray io sy ny Pmu France izay tompon’ny vokatra, raha tsiahivina. Efa niakatra fitsarana teny anivon’ny tribonaly frantsay mihitsy ny raharaha, ka tsy nahazo rariny tamin’ny fitoriana nataony ny Pmu Madagasikara. Vokatry ny tatitry ny ACHEL tamin’ny PMU France mikasika ny tsy fanajana ny fifanarahana teo aminy sy ny PMU Madagascar no anton’ny fampiatoana. Niainga tamin’ny fidiran’i Madagasikara tamin’ny lalao iraisan’ny firenena maro na ny « Mass commune » izay niditra teto amintsika nanomboka ny volana mey 2017 tamin’ny alalan’ny PMU bet moa izany tsy fanajana ny fifanarahana nataon’ny PMU Madagascar izany ka anisan’ny voakasika ny tsy fandoavana araka ny tokony ho izy ilay 5% azo avy amin’ny fitrandrahana ireo lalao avy amin’ny hazakaza-tsoavaly ireo.